२ महिनामा डिजिटर वडा बनाउने छु – Karnali Pati
२ महिनामा डिजिटर वडा बनाउने छु
देशमा संघीय व्यवस्था लागू भएको दुई वर्ष भन्दा बढी समय वितिसकेको छ । दुई वर्षको अवधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको लागि के काम गरेका छन् । २० वर्षसम्म कर्मचारीले चलाएको स्थानीय तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कति काम गरे काम गर्दै जादा के के समस्या छन्, स्थानीय सरकार कसरी चलेका छन, विकास निर्माणका काम कसरी भएका छन् ? दुई वर्षसम्म देखिने गरी के के काम भए बाँकी दिनमा आफ्नो स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने योजना के छन ? यस्तै विषयवस्तुमा रहेर कालीकोट जिल्लाको सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष नरेश बमसंग कर्णालीपाटीकर्मी पुष्पराज भट्टराईले गरेको कुराकानी
वडाले विकासका कामलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ?
विकासको कुरा गर्ने हो भने, हामी निर्वाचित भएको पनि दुईवर्ष भन्दा बढी वितिसकेको छ । दुई वर्षको अवधिमा वडामा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ । समाजमा हुनुपर्ने सोचको विकास हो । तर सोचको विकास नभएको देखिन्छ । भौतिक विकासको कुरा गर्दा दुई वर्षको अवधिसम्म मेरो हेराईमा काम राम्रा भएको देखेको छु । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयको चरणमा रहेकाले सामान्य समस्या आउन स्वाभाविक हो ।
दुई वर्षको अवधिमा देखिने गरी के के काम गर्नुभयो ?
हामीले देखिने गरी वडा कार्यालयको भवन निमार्ण गरेका र्छौ, सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका–५ मा कर्णालीकै पहिलो रिङरोड बनाएर प्रत्येक नागरिकको घरदैलोसम्म मोटर बाटो पु¥याएका छौ । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्था गरेका र्छौ भने अन्य योजना निमाणाधिन नै रहेका छन् ।
कृषिका क्षेत्रमा पनि तीव्र गतिमा काम भइरहेका छन् । कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रमा मोडेल एरिया तोकिसकेका छौँ । तिनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजानेतर्फ लागिरहेका छौँ । खनिएका बाटोको स्तर उन्नति गर्नतर्फ लागेका छौँ ।
निर्वाचनका बेला जनताका माझमा कस्ता प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो ?
म चुनावी मैदानमा आउर्दै गर्दा मैले धेरै ठुला प्रतिवद्धता त गरिन किन भन्दा काम गरेर देखाउनु थियो, प्रतिवद्धता गरेर मात्रै हुने केही थिएन जनताको हितका लागि मैले प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता, वडामा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, स्मार्ट वडा घोषणा, डिजिटल वडा कार्यालय घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थिए ।
के तपाईले गरेका प्रतिवद्धता सवै कार्यान्वयन भए त ?
अह, सकिएको छैन मैले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता मध्ये ८० प्रतिशत प्रतिवद्धता पुरा भएका छन् जस्तो लाग्छ, त्यो त जनताले मुल्यांकन गर्ने हो, भने २० प्रतिशत प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकिरहेको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी, रिङरोड पुरा भएपनि अव स्मार्ट वडा र डिजिटर वडा घोषणा गर्न बाकी छ यो पनि दशै भित्रमा कर्णाली प्रदेशकै डिजिटल वडा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।
काम गर्दै जाँदा जटिलता के पाउनुभयो ?
जटिलता र समस्याको कुरा गर्ने हो भने थुप्रै छन् । संविधान नयाँ छ तर मान्छेका सोच पुरानै छन् । त्यो सोचमा काम गर्दा धेरै जटिलता भोग्नु परेको छ । संविधानले गरेका व्यवस्था जनस्तरसम्म पु¥याउन नसकिरहेको अवस्था छ । हामीले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ ।
अबका योजना के के छन ? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
हामीले देशको विकास गर्न ’सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली’ को नारालाई अवलम्बन गर्दै संविधान तह कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको व्यवस्थाअनुसार सोही व्यवस्थामा रही प्रतिस्पर्धी नभई सहयात्री हो भन्ने भावनाका साथ काम गर्यौ भने अवश्य पनि देशको विकास हुनेछ । सकारात्मक सोचका साथ अघि बढौँ सहयात्री भावनाको विकास गरौँ सबैलाई समान रूपमा हेरेर समान अवसर प्रदान गर्ने सोच राखेर गर्यौ भने हामी सफल हुने र्छौ । र हुन्छौ पनि । अव कुरा रह्यो सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाको सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका–५ लाख दर्शै भित्रमा स्मार्ट र डिजिटल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छु । सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ५ का जनताको गास बास र शिक्षाको ग्यारेन्टी वडाले गर्ने लक्ष्य राखेको छ हेर्रौ कत्तिको सफल भईन्छ ।
दशै भित्र डिजिटल वडा घोषणा गर्नका लागि के के प्रक्रिया पुरा गर्नुभएको छ ?
हो, डिजिटल वडा घोषणाका लागि आवश्य पूर्वाधार तयार भईसकेका छन्, आफ्नै वडाको भवन छ, अव सवै डिजिटल प्रविधिमार्फत जनताको माझमा जानेर्छौ हस्तलिखित निवेदन दिन पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ, नागरिक वडापत्र, डिजिटल हाजिरी, वडाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा मानिसले चाहेको बेलामा मोवाईलमा नै हेर्न मिल्ने लगायतका प्रक्रिया पुरा गरिसकेका र्छौ ।
बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीबारे के सोच्नुभएको छ ?
बेरोजगार युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेका छौँ । नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नै युवाहरूलाई गाउँमै परिचालन गर्ने छौँ । हामीले पनि युवाहरूलाई कहाँ कुन काम दिन सकिन्छ भनेर योजना बनाएका छौँ । कुन व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको काम दिने कस्तो काम दिँदा उसलाई राम्रो हुन्छ त्यो निर्धारण गरेर काम दिने तयारी मा छौँ ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन २०, २०७६ 11:10:57 AM